Fiteny nôrveziana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fiteny norveziana)
Ny fiteny nôrveziana dia fiteny jermanika tenenina ao Nôrvezy izay nanam-pototra ara-tantara avy amin' ny fiteny nôroà tranainy, izay nampiasaina hatramin' ny Andro Taloha tany Skandinavia. Ny Nôrveziana dia miantso ny fiteniny hoe norsk. Ny fiteny nôroà tranainy dia razana mivantan' ny fiteny danoà sy ny fiteny soedoà izay tenenina ankehitriny sady nisy akony azo tsapain-tanana amin' ny fiteny anglisy tranainy izay nipoiran' ny fiteny anglisy ankehitriny. Misy voambolana sasany izay azon' ny fiteny normàna tranainy tamin' ny fiteny nôroà.
Ny fiteny nôrveziana ankehitriny dia miseho amin' ny endrika isam-paritra maro izay manana fahasamihafana mitovy amin' ny fahasamihafany amin' ny fiteny danoà sy ny fiteny soedoà. Misy fisehony samy ara-penitra roa ny fiteny nôrveziana, dia ny fiteny bokmaly (bokmål) sy ny fiteny ninôrska (nynorsk).
Ireo fiteny roa ireo dia fiteny nôrveziana namboarina, ka ny voalohany (bokmaly) dia manakaiky ireo fitenim-paritra ao amin' ny farira atsimo-atsinanana (faritr' i Oslo) fa ny faharoa kosa (ninôrska) dia manakaiky ireo fitenim-paritra ao amin' ny morontsiraka andrefana. Arakaraka ny fanakaikezana ireo faritra ireo ny ampiasana ireo endri-piteny roa ireo amin' ny fanoratana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_nôrveziana&oldid=1001778"
Dernière modification le 27 Febroary 2021, à 00:34
Voaova farany tamin'ny 27 Febroary 2021 amin'ny 00:34 ity pejy ity.